सबैले घर मा एक बाथरूम, कार्यात्मक सौंदर्य र आधुनिक थियो बनाउन बारेमा सपना। यसलाई मा न्यानोपन ल्याउन र सान्त्वना ठूलो आधुनिक डिजाइन सिर्जना गर्नेछ जो, तपाईं स्नान स्क्रीन मदत गर्नेछ। स्क्रीन के हुन्?
आज, सजावट यो तत्व धेरै साधारण छ। क्लासिक स्क्रिनको डिजाइन एकदम सरल छ। यो दुई गाइड वा सामान्यतया एल्यूमीनियम, हार्ड प्लास्टिक वा इस्पात देखि बनेको छ जो फ्रेम, constituting एक फ्रेम हुन्छन्। पानी प्रतिरोधी परमवीर चक्र वा अन्य सामाग्री को एक वा बढी प्यानल फ्रेम संलग्न छन्। डिजाइन आधारमा, को प्यानल ठोस वा धेरै तत्त्वहरू समावेश। सामान्यतया यो मोबाइल तत्व हो। तिनीहरूले खुला कोठरी को सिद्धान्त मा छ, गाइड साथ धकेल्न वा साधारण मन्त्री ढोका खुला रूपमा स्विंग। कुनै पनि अवस्थामा, यस्तो प्यानल को स्नान अन्तर्गत स्पेस पहुँच प्रदान गर्नेछ। यो आफ्नो indisputable फाइदा छ।
सबै भन्दा लोकप्रिय स्नान स्क्रीन 150 वा 170 सेमी को एक लम्बाइ छ। तिनीहरू अभिप्रेरित छन् सजावट लागि। त्यहाँ पनि गैर-मानक विकल्पहरू स्क्रीन छन् - तिनीहरूले यति लोकप्रिय छैन। उदाहरणका लागि, डिजाइन र मोडेल को semicircular चाप गर्न। तिनीहरूले सहज स्नान स्क्रीन कूप छन्। आफ्नो ढोका जो धेरै उपयोगी विवरण राख्न मा समतल छन्।
धेरै एक ईटा संरचना र कोट टाइल्स वा मोजाइकहरूमा यसलाई निर्माण गर्न स्क्रिनमा एउटा वैकल्पिक रूपमा रुचाउँछु। तर, यो विधि एक drawback छ - संचार को कुनै पनि विफलता एक स्थायी संरचना भङ्ग हुनेछ हुँदा। अझ सुविधाजनक र न्योचित विकल्प - यो स्नान स्क्रीन खोल्ने गर्न त्यसैले सजिलो छ।
तपाईं अक्सर प्रश्न सुन्न सक्नुहुन्छ सेट गर्न कसरी गर्ने स्नान मा स्क्रिन। तपाईं केवल तीन कदम के गर्न छ:
- यो स्नान को शीर्ष किनारा मा स्क्रिन सम्मिलित;
- तल भाग, यो तलामा लम्ब थियो भनेर खुट्टा सेट जो मा;
- यो स्नान किनारा गर्न स्क्रिनको शीर्ष लक गर्न प्रमुख № को खुट्टा 10 हटाउन प्रयोग गरेर। एउटै आवश्यकता गरेका र दोस्रो खुट्टा संग गर्न। सबै, स्क्रिनमा सेट गर्नुपर्छ। यो सजिलो, छैन यो छ? कुल मा, स्नान अन्तर्गत स्क्रिनको स्थापना मात्र केही मिनेट लिन्छ।
महंगा काठ, कृत्रिम पत्थर, ग्लास सरल प्लास्टिक मोडेल देखि - यी दिन, स्टोर सामाग्री को एक किसिम ले गरे स्क्रीन को विभिन्न मोडेल विभिन्न प्रस्ताव।
यो सही र सुन्दर सहायक हालै निर्माण सामाग्री हाम्रो बजार मा देखा, तर हाम्रो सँगी नागरिक धेरै धेरै वर्ष को लागि यो बारेमा थाह छ। सोभियत समयमा, त्यहाँ तथापि, आफ्नै हात उत्पादन, सामान छन्। आज, यो यसको उत्पादन लागि समय र ऊर्जा खर्च गर्न कुनै अर्थमा बनाउँछ। कुनै पनि हार्डवेयर स्टोर मा मुद्रा को एक अपेक्षाकृत सानो रकम लागि, तपाईं लामो लिन जो छैन आफ्नो मनपर्ने मोडेल बोट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
मिति, स्नान लागि स्क्रीन - यो सबै कमजोरीको लुकाउन सक्नुहुन्छ कि यसको मोहरा को प्रत्येक सजाउनु गर्न सजिलो र सबै भन्दा किफायती तरिका हो।
सानो बाथरूम: आकार, आकृति। मिनी स्नान कुना, sessile, राउन्ड
एक्रिलिक bathtubs: अमिल्दो मोडेल आज लोकप्रियता को शिखर मा
SuperFetch: सेवा कस्तो र चाहे त्यो आवश्यक छ यसलाई अक्षम गर्न
Feminism - एक दर्शन वा राजनीति?
स्कट Parker - एक पौराणिक कथा, "Charlton"
क्वान्टम भौतिक: प्रकाश को क्वांटम गुण
विकल्प र analogues "kenalogom": समीक्षा र तुलना
घर मा चिप्स: यो स्वादिष्ट हुन सक्छ कि असम्भाव्य छ